Farsamooyin lagu soo jiito Garoob caruur leh oo aad jeclaatay..! | Gaaloos.com
Home » galmada » Farsamooyin lagu soo jiito Garoob caruur leh oo aad jeclaatay..!
Farsamooyin lagu soo jiito Garoob caruur leh oo aad jeclaatay..!
In aad shukaansato gabar aan guur soo marin iyo garoob lasoo furay waa laba arimood oo aad u kala duwan, una baahan in la kala barto si loo helo mid kastaba sida loo wajaho.
Hadaba hadii aad tahay nin ku howlan amaba jecel barashada haweeney guur soo martay (garoob) waxaa kula gudboon in aad ahmiyad gaar ah siisid arimahan hoos ku xusan, si xiriirkiinu u noqdo mid guul iyo guur hagaaga sabab u noqda.
1- Ogow inaad kaalinta labaad ku jirto, hadii ay caruur leedahay.
Wey adagtahay in aad xiriir jaceyl la sameyso ruux aad ogtahay inuu ku gelin doono kaalinta labaad ee noloshiisa, balse ogow hadii aad shukaansaneyso haweeney garoob ah oo caruur leh, in caruurteedu ahaan doonaan kaalinta koowaad sida hooyo walbaba ay sameyso, taasoo ka dhigan in aadan waqti badan iyo fursado badan aadan u heli doonin qoftaas si shukaansigiinu u noqdo mid macaan gooni ah leh.
2- Deganaan badan muuji, waqtina sii.
Shukaansiga garoobadu waa arin u baahan dulqaad gooni ah gaar ahaan marka ay tahay qof dhawaan lasoo furay, haka filanin in ay wax walba sida aad rabto noqdaan, maxaa yeelay maskaxdeeda waxaa kusoo noq noqonaya sawiro iyo muuqaalo nolol qaraar ama macaan leh oo ay lasoo qaadatay ninki wadada kaaga horeeyay, waana inaad siisaa waqti ay kugu dhex gasho si ay u hilmaanti wixii hore.
RIIX HALKAN KA DAAWO VIDEO SIRTA OO DHAN
3- Baaritaan sameey, balse haka bad badin.
Waa muhiim in aad weydiiso sababta guurkeedii hore u fashilmay ama loo furay, si aad jawaabteeda uga dhex heshid qaabka ugu haboon ee aad ula dhaqmi doonto waaba hadii ay runta kuugu jawaabtee, balse waxaa iyadana ka fiirsi u baahan in su’aalahaadu aysan noqon kuwa u eg eedeysane lasoo xiray oo su’aalo laga weydiinayo danbigiisa.
4- Fahan ayaa lagaa rabaa marka ay xaajigeedi hore la hadleyso.
Niman badan ayaa dareema maseyr iyo madax xanuun marka ay arkaan ayadoo la hadleysa xaajigeedii hore, balse xaqiiqda ayaa ah in xaajigeedii hore uu yahay qeyb ka mid ah nolosheeda, hadii ay meesha caruur joogaana arinku waaba kasii fog yahay, waxaana loo baahan yahay in aadan horey ka xanaaqin ee aad u fiirsato ujeedka la iskula hadlay iyo danaha isku keenay, maadaama ay yihiin dad xidid iyo xiriir u dhex maray oo waliba hal go’ isla huwaday.
Title: Farsamooyin lagu soo jiito Garoob caruur leh oo aad jeclaatay..!